H.E. Daw Hmway Hmway Khyne Presents Credentials to President of the Italian Republic – Ministry of Foreign Affairs
H.E. Daw Hmway Hmway Khyne Presents Credentials to President of the Italian Republic
Daw Hmway Hmway Khyne, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to theItalian Republic, presented herCredentials toHis Excellency Mr. Sergio Mattarella,President of theItalian Republic on6February2020inRome.
Dated. 13 February 2020
သံအမတ်ကြီး ဒေါ်မွှေးမွှေးခိုင် အီတလီသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတထံ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်
အီတလီသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးဒေါ်မွှေးမွှေးခိုင်သည် ၎င်း၏သံအမတ် ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ရောမမြို့၌ အီတလီသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ ဆာဂျီရို မတ်တာရီလာထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်